COMESA Election Observers arrive in Zimbabwe – Report Focus
COMESA Election Observers arrive in Zimbabwe
A nine-member Common Market for Southern and Eastern Africa pre-observer mission team arrived in the country this Tuesday and will be in the country for preliminary works ahead of the 2018 harmonised elections.
The team is expected to meet all stakeholders to the harmonised elections, including participating political parties and those involved in organising and administering the electoral process in Zimbabwe.
The group’s first port of goal this morning is the Minister of Foreign Affairs and International Trade Retired Lieutenant General Dr Sibusiso Moyo’s office at Munhumutapa building.
From there they will meet the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) Chairperson Justice Priscilla Chigumba at the ZEC headquarters.
The pre-electoral assessment mission to Zimbabwe’s programme also includes meeting the Chief Justice, Police Commissioner, ruling party officials, MDC-T leadership, Home Affairs and Information, Media and broadcasting services ministries.
The mission will also meet the Election Resource Centre, National Patriotic Front, CODE, ZAPU, ZNERA, MDC Alliance Coalition of political parties, representatives of political parties not in parliament, the Zimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission and the Build Zimbabwe Alliance.
AfricaCOMESA Election ObserverszimbabweZIMBABWE 2018 ELECTIONS